kuvhuraSUSE Tumbleweed yatove neGnome 3.24 | Linux Vakapindwa muropa
Mutungamiri weOpenSUSE Tumbleweed projekiti, Dominique Leuenberger, akazivisa zviri pamutemo kuti kugovera kwatova neGnome 3.24 seyazvino vhezheni yeGnome desktop.
Kugovera kunoenderana neSUSE Linux, OpenSUSE inozivikanwa nekuve nemifananidzo yeKDE nharaunda kunyange iine mamwe madhesiki akaita seGnome kana Xfce anoshanda pamwe chete ne KDE. Mune ino kesi, timu yekusimudzira yakagadzirisa iyo Gnome desktop vhezheni kune yayo yazvino vhezheni.
Pamusoro pekubatanidza iyo Gnome 3.24 seimwe nzira yePlasma, OpenSUSE Tumbleweed yaisanganisira GCC 7 seyunosanganisa compiler yekugovera., pamwe chete neGCC 6, yakajairwa compiler yekuparadzira.
Ichi chinhu chinoshanduka mune inotevera vhezheni uye ichave yakajairwa compiler yekuparadzira, nokudaro ichisiya GCC 6, inova ndiyo default default mugove wekugovera. Pamwe chete neGCC 7 uye Gnome 3.24, OpenSUSE Tumbleweed ine zvimwe zvinhu zvitsva pakati pezvirongwa zvakajairika mukuparadzira. Mune ino chikamu inosimbisa kernel 4.10.4, yazvino vhezheni yakagadzikana yeLinux, Qemu 2.8 yekuona kana Mozilla Firefox 52.0.1 pakati pezvimwe zviratidzo zvakakurumbira.
OpenSUSE Tumbleweed yatove ne kernel 4.10.4 pamwe neGnome 3.24
Iyo inotevera vhezheni yeOverSUSE Tumbleweed ichave iine nyowani KDE-zvine hukama maficha, senge Plasma 5.9.4 desktop kana iyo 4.10.5 kernel. Pasina kukanganwa kuti software yazvino ichaonekwa mumazuva ano ichave iri mukugovera. Kunyangwe pane izvo isu tichafanirwa kumirira kwechinguva.
OpenSUSE Tumbleweed iri kutenderera kuburitsa kugovera Iyo yakavakirwa paOpenSUSE, ndiko kuti, izvo zvekuvandudzwa zviri kuenderera uye hazvidi zvemwedzi neshanduro. Izvi zvinoreva kuti vashandisi vane OpenSUSE chete vanofanirwa kugadzirisa yako inoshanda sisitimu neYast kuti uwane idzi shanduko. Kana isu tisina OpenSUSE Tumbleweed, tinogona kuwana kugovera uku kuburikidza Iyi link. Chero zvazvingaitika, isu tinongoda kuiisa kamwe chete kuti titore zvekupedzisira kubva mukugovera uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » kuvhuraSUSE Tumbleweed yatove neGnome 3.24
Asi mufananidzo wawakaisa hausi gnome
Chokwadi, iko kutarisa kukuru. Kunyanya kutarisisa ndapota.
Ndichinakidzwa nacho kubva Mugovera :) uye ndakagutsikana nacho kusvika parizvino.